Talo Iyo Tusaaleyn – Lamaanaha Baraha Bulshada Ka Soo Muuqda - Aayaha
Aayaha editorNovember 24, 2018
Maalmo yar ka hor waxa la is weydiiyay fekerka laga qabo lamaanaha baraha bulshada kusoo bandhigo jaceylka ay isku qabaan. Waxaana ka so baxay jawaabo kala duwanb oo ay kamid ahaayeen; Wa wax qaldan 100%, Wa is-muujin iyo halagaa sheego, Wa sax 100%, Iyo Wa si quman haddii si wanagsan loosoo bandhigo ,waana laga fiican yahay haddii si aan sharciga waafaqsaneyn loo soo muujiyo.
Intaasiba waxey ahayen qof walba iyo aragtidiisa . Waxana ugu dhaw sax ahaan aragtida ugu danbeyso 100% ,Walow inta kalana ay ku dabaqeen aragtidooda oo aysan qaldaneyn.
Dad baa waxey dhaheen nimcooyinka waa laqarsadaa iyagoo soo daliilsaday Axaadiista nabiga NNKH . Laakiin waxa su’aal mudan nimcooyinka kama mid ahan miyaa ;
Guurka la isugu hambalyeeyo lana so dhigo baraha bulshada. Caruurta oo la isugu hambalyeeyo Markey dhashaan. Waxbarshada la isugu hambalyeeyo marka la dhameeyo.
Intaasiba waa nimcooyin eysan heysan kuwa badane hadabo maxa loo qarin waye ……?
Middeeda kale bandhigga jaceylka ma ahan oo keliya sawirro la islagalo amaba hadallo qura, Sababtoo ah wey ku kala duwanyihiin dadku habka ay ku so bandhigaan jaceylkooda.
Tusaalayaasha aan soo qaadan karno waxa ka mid ah, Hadiyado la isasiiyo amaba munaasabado gaar u ah lamanahaasi in ay wadagan. Sida maalinta guurkooda, maalinta horumar uu midkood gaaro, sagootinta markuu midkood safrayo amaba soo dhaweynta midkood markuu imanayo iyo is-dhiiragelinta. Inta kaso hertayna waa kuwa qarsoon.
Dad badan baa iyagana qabay wa qalad haddii dib loo raacana sababtu wey saxantahy; Lamaane shaqo kale aan laheyn ee maalin walba soo dhiga baraha bulshada arimahooda. Taas oo nuxurka ka qaadeysa ahmiyadda . Sido kalane aan umadda wax micno ah usameyneyn.
Dhanka kale Waxa jira lamaane si anshax xuma ah usoo bandhiga sawirro iyo muuqaallo aan munaasab aheyn sida iyagoo is dhunkanayo, mana ah wax qurxoon oo waa laga wacanyahay.
Lamaanaha bulshada somaaliyeed 90%, ma aha kuwa laga dareemo amaba so bandhiga jaceylkooda si qarsoon amaba si shaacsan labada marba, waxana ugu wacan
Dhaqanka soo jireenka ahaa ee xishoodka ku dhisan
Burburka iyo dagaalada sokeeye ee dalka mar la dagay
Aqoon yarida laga qabo dhanka arimaha qoyska.
Blase dhanka togan marka aan ka eegno, burburka reeraha soomaliyeed waa mid aad u badan, haddii la helo reer faafinaya wanaaga ay iskula nool-yihiin waxa laga yabaa iney arkaan kuwa qarka utaagna inu reerkooda burburo islamarkaana u istaaga sidey u noqon lahaayeen lamaanahaasi oo kale….
Haddii aad dib u aqrisaan sheekooyinka nabigeenna NNKH, amaba Saxaabada AHN, waxaad fahmi kartaa waxii qal-dan iyo waxa saxan adigoo miisaan ka dhiganaya diinta.
Sido kale madaxda caalamka iyo lamaanahooda iyagana haddii aad raadiso sheekooyinkooda waxaad fahmi karta waxa togan iyo waxa taban.
Hadii marka la dhaho nimcooyinka hala qariyo adigaba maalinkaad ku soo biiirtay dunidaan waxa aad aheyd nimco lagumana qarin. Iyagoo ay Joogaan kumanaan aanan caruur heysan laakin iimanka qalbigooda ku jiro iyo kalsoonida ay ku qabaan rabigooda ayaa ka weyn. Hadii ay jiran dad nimcaduu Alle ku siiye ka xumadana qalbiga ayeey ka jiranyihin, kuwa ilaah ku xiranna ma ahan.
Ugu danbeyn lamaanaha caadeystay mar walba iney so dhigaan arimahooda gaarka ah iyagana waxaan leenahy ka hor soo dhigitaankiina aan ka aragno dhaqankiina, innagaaba idin soo dhigi doonnee .
Talo: Micno u yeela so dhigista muuqaalada iyo sawirrada qoyska, hana noqdaan kuwa wax tar u leh umadda. Ka bad-badiskana aan joojinno.
Qaluubta iskaabuladana hala ilaaliyo ………….Kaftan